हे Guys, यो ट्युटोरियल मा हामी तपाईंलाई आफ्नो Android सेलफोन मा Spotify प्रिमियम APK प्राप्त गर्ने सही तरिका सूचित गर्नेछौं. मामला मा तपाईंलाई एक उत्कृष्ट संगीत प्रेमी र आफ्नो दिन संगीत संग समाप्त, तपाईं अतिरिक्त जब तपाईं काम संगीत पालन लिन, त्यसपछि यो पाठ लागि बस छ. संगीत तपाईं melancholy बाहिर र तिमी सामग्री बनाउन मदत गर्नेछ.
त्यहाँ तपाईं-लाइन संगीत पालन लिन वा घरेलू आफ्नो मिसिन मा प्राप्त गर्न अनुमति अनुप्रयोगहरू को एक नम्बर हो. रूपमा सबै थाहा, Spotify खातामा Android को लागि सबै भन्दा राम्रो संगीत अनुप्रयोग लिएको छ, तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्थानहरू धेरै बाहिर त्यहाँ छैन. Android को लागि Spotify प्रिमियम APK बारेमा यो पाठ सिक्न.
Spotify प्रिमियम APK डिजिटल संगीत र पडकास्ट तपाईं प्रविष्टि प्रदान गर्दछ एउटा अनुप्रयोग हो, ठाउँ तपाईं पालन लिन र निःशुल्क गीतहरू लाखौं दसौं प्राप्त हुन सक्छ. अनुप्रयोगको मानक कुनै पनि दोस्रो छ रूपमा यो अनुप्रयोग आफ्नो सबै भन्दा राम्रो साथी मा परिवर्तन गर्न सम्भावित छ.
Spotify प्रिमियम APK
Spotify प्रिमियम APK निःशुल्क डाउनलोड गर्न सकिएन. यसलाई थप तपाईं आफ्नो मनपर्ने गीतहरू सबै प्राप्त र तिनीहरूलाई ध्यान लिन सँधै तपाईं को आवश्यकता ठाउँ कुनै पनि मिसिन मा काम गर्दछ. यो अनुप्रयोगले, तपाईं कुनै पनि समयमा प्रवेश भनेर सकेजति आफ्नो प्लेसूची सिर्जना हुन सक्छ, वा तपाईंले पनि इन्टरनेटमा केही प्लेसूचीहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं कलाकार र एल्बम सोझो प्रवेश गर्न ध्यान लिन प्राप्त.
त्यहाँ निःशुल्क प्याकेजहरू को एक नम्बर हो, परीक्षण, यो अनुप्रयोग को प्रिमियम र अपार संस्करण. तपाईं धेरै बाहिर डाउनलोड संग मा-लाइन गीतहरू पालन लिन इच्छा, त्यहाँ तिनीहरूलाई लागि अनुप्रयोगहरू धेरै छन्, तर तिनीहरूले धेरै विकल्पहरू छैन वा धेरै विज्ञप्ति छ, वा तिनीहरूले मुक्त हुनेछैन.
डाउनलोड Spotify APK फ्री
त्यहाँ संगीत पालन लिन अनुप्रयोगहरू धेरै छन्, तर ती कुनै पनि मिनेट को एक जोडी पछि तपाईं पूरा हुनेछ. घटनाको तपाईं यसलाई बाहिर four.5 मूल्याङ्कन किनभने Android को लागि Spotify प्रयास गर्न त वास्तविक संगीत प्रेमी हुनुहुन्छ5व्यक्तिहरूको सयौं प्ले खुदरा गुगल भित्र.
प्लस, यो अनुप्रयोग स्पष्ट इन्टरफेस र विभिन्न राम्रो कुरा छ कि यो एक नियमित आधार प्रयोगमा लागि भरपर्दो बनाउँछ छ. व्यक्तिहरूलाई Spotify देखि खुशी प्राप्त, तपाईंले केही डाउनलोड र समालोचन संग सोच्न सक्छ रूपमा.
यो प्रिमियम Spotify अनुप्रयोग केही अतिरिक्त विकल्प एक संगीत र भिडियो स्ट्रिमिङ अनुप्रयोग हो, पोडकास्ट प्रदायकहरू अनुरूप, भनेर संगीत को स्वीकार्य समुदाय सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ मतलब र एक उत्कृष्ट विशेषज्ञता दिन.
तपाईं Spotify प्रिमियम प्रयोग गर्नुपर्छ, र तपाईं सबै भन्दा राम्रो संगीत विशेषज्ञता प्राप्त हुन सक्छ, र तिमी पनि यो अनुप्रयोगले प्याकेजहरू को मिश्रित किसिमका गीतहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईंको चाहन्छ र आवश्यकताहरु लागि काम गर्दछ सही हालतमा चयन.
बस मात्र एक सेकेन्ड मा प्राप्त बाहिर सुरु गर्न प्राप्त बटन मा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यो अनुप्रयोगको सेट अप प्रविधी सिक्न. तपाईं एक कदम छोड्न छैन वा त्रुटिहरू बनाउन सुनिश्चित.
मिति सम्म फरवरी 20, 2018
स्थापित 200,00शून्य,00शून्य +
वर्तमान मोडेल eight.four.39.673
Android आवश्यक four.1 + (एसडिके 16)
विकासकर्ता Spotify लिमिटेड.
सामग्री सामाग्री कुल को लागि दर्जा 12+
विकल्पहरू - Android को लागि Spotify प्रिमियम APK
त्यहाँ Spotify प्रिमियम को विकल्प को एक नम्बर हो. के तपाईं आफ्नो सेलफोन प्ले गर्न चाहनुहुन्छ कुनै पनि धुन खेल्न सक्षम. यसबाहेक, तपाईं Spotify प्रिमियम APK प्राप्त गर्न हुन भने, त्यसपछि तपाईं पनि मुक्त लागि निःशुल्क लागि कुनै पनि धुन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. यो प्रिमियम संस्करणमा, तपाईं पप-अप विज्ञप्ति र स्पाम विज्ञप्ति सबै किसिमका निःशुल्क हुन सक्छ. अर्को विकल्प अतिरिक्त बारेमा कुरा गर्दै.
यो अनुप्रयोग पूर्ण Advert निःशुल्क छ र तपाईं पप-अप वा मालवेयर को कुनै पनि प्रकारको प्राप्त gained't.
परम्परागत अनुप्रयोग तपाईं बाहिर विज्ञप्ति यसलाई प्राप्त गर्छन् जसद्वारा छैन तपाईं अपार छड्नुहोस् समारोह प्राप्त हुनेछ.
यो अनुप्रयोगले, तिनीहरूले उठाएर गर्नुभएको ड्राइव अनियमित प्रतिबन्ध. यो अनुप्रयोग प्राप्त गर्न निःशुल्क छ र तपाईं निःशुल्क अपार संगीत स्ट्रीम सक्छ.
तपाईं पनि शीर्ष गुणवत्ता मा नि: शुल्क आफ्नो सेलफोन सबै गीतहरू प्राप्त र तिनीहरूलाई ध्यान लाग्न सक्छ सँधै तपाईं चाहनुहुन्छ.
तपाईं पनि आफ्नो फरक ग्याजेटहरू वा सेलफोन तपाईंको गीतहरू समिकरण गर्न सक्छ, गोली र पनि आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटर मा. तपाईं बाहिर कुनै पनि नगद तिर्ने निःशुल्क रेडियो को एक नम्बर पालन लिन सक्षम.
Android मा कसरी Spotify APK सेट गर्न सक्नुहुन्छ
आफ्नो सेलफोन सेटिङहरू खोल्न, सेटिङहरू, यसलाई अज्ञात स्रोतबाट लागि सेट अप अनुमति महत्त्वपूर्ण. जाऊ त्यहाँ सेटिङहरू - सुरक्षा - निशान अज्ञात स्रोत.
फाइल पर्यवेक्षक को तरिका द्वारा डाउनलोड फाइल खोल्न वा डाउनलोड सूचीबारे फाइल खोल्न. त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् सेट अप र केही सेकेन्ड को लागि. र तपाईं आफ्नो सेट अप लाभदायक छ भनेर याद हुनेछ.
अब तपाईं बस अहिले राख्नु जो अनुप्रयोग खोल्न र त्यसपछि आफ्नो Spotify खाता साथ सँगै जाँच. घटनाको एउटा खाता छैन, त्यसपछि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा गएर दर्ता खाताको लागि
अब अनुप्रयोग खोल्न र तपाईं बस हस्ताक्षर र तयार हुनुहुन्छ जब तपाईंको खाता साथ सँगै जाँच. अब तपाईं कुनै पनि मुद्दा आफ्नो सेलफोन यो अनुप्रयोग प्रयोग गर्न आवश्यक.
मामला मा तपाईं यो अनुप्रयोग सीमित गर्ने सही तरिका त्रुटिहरू सामना, त्यसपछि केवल एक अमेरिकी-स्वामित्व VPN संग हुक. तपाईं बिल्कुल भारत यो त्रुटि र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय स्थानहरू प्राप्त. तपाईं बस हाम्रो Spotify प्रिमियम APK काम सामना गर्न सक्षम. तपाईं शायद कुशलतापूर्वक मा लग, तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन मा हेर्न सक्नुहुन्छ Spotify प्रिमियम को विकल्प को सबै आफ्नो औंलाहरु मा. हामी यो चाल प्रयास गरेका छन्, र यो साँच्चै हामी प्रयास देखि हाम्रो लागि ठीक काम गर्दछ, र यो तैपनि काम गर्दछ.
सबै को लागि वर्तमान दिन छ, तपाईं Android को लागि Spotify प्रिमियम APK बारेमा सबै अध्ययन. त्यहाँ कारण धेरै छन् किन यो फरक अनुप्रयोगहरू बाटो यो अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ. तपाईंले प्रचार स्पाम को कुनै पनि प्रकारको र विभिन्न समस्याहरू पूर्ण प्रविष्टि प्राप्त. Android को लागि Spotify प्रिमियम यस mod संस्करणमा, तपाईं संग एक एमपी -3 फाइल प्राप्त गर्न सक्छ 320 kbps, जो खाता सर्वश्रेष्ठ संगीत मा लिएको छ. तपाईं पनि ध्वनि प्रणाली मा यो संगीत खेल्न सक्षम छौँ, अडियो सिस्टम वा हेडफोन. घटनाको तपाईं को सेट अप पाठ्यक्रम भर त्रुटि पत्ता, बस एक टिप्पणी प्रस्थान. हाम्रो समूहमा तपाईंलाई सहयोग गर्नेछ. यसबाहेक, तपाईं यसलाई उपयोगी पत्ता लगाउन हुन भने, तिनीहरूलाई खुशी प्रदान गर्न आफ्नो सबै जीवनसाथी र संगीत प्रेमीहरूलाई साझेदारी.
Spotify संगीत .APK फाइल को नवीनतम संस्करण डाउनलोड
अद्यावधिक बाँकी: मार्च 12, 2018
फाइल परिमाण: 37एमबी
साधारण पोस्ट जाने :
Carrom 3D मुफ्त APK डाउनलोड
खुबै चलेको APK डाउनलोड
Gloud खेल APK डाउनलोड
विगो भिडियो – पूर्व Hypstar 3.8.1 APK
डाउनलोड Zapya APK v5.1 निःशुल्क डाउनलोड – मोबाइल लागि सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयोग
UkTVNow (आगो टिभी) .APK डाउनलोड – मोबाइल लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरू
VidTrim – Video Trimmer v1.2.5 – APK डाउनलोड – मोबाइल लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोग
सडक दौड 3D APK डाउनलोड – Android को लागि नि: शुल्क दौड खेल
अमेजन भूमिगत .APK डाउनलोड – मोबाइल लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोग
Megabox HD APK फाइल डाउनलोड – मोबाइल लागि सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयोग
गुगल क्लिप्स APK डाउनलोड | सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयोग…
शान्त – मनन, निद्रामा, आराम APK डाउनलोड…
Carrom 3D मुफ्त APK डाउनलोड – मुक्त…
गुगल क्रोम: छिटो & सुरक्षित APK डाउनलोड…
Ludo नियो-क्लासिक APK डाउनलोड – Free Board…